Guuleed “Safarka Jawaari ee Dhuusa Mareeb wuxuu carqalad ku yahay xasiloonida iyo geedi socodka” | shumis.net
Home » galmada » Guuleed “Safarka Jawaari ee Dhuusa Mareeb wuxuu carqalad ku yahay xasiloonida iyo geedi socodka”
Guuleed “Safarka Jawaari ee Dhuusa Mareeb wuxuu carqalad ku yahay xasiloonida iyo geedi socodka”
Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Cadaado ayaa walaac ka muujiyay safarka uu Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ku tagay degmada Dhuusa Mareeb.
Guuleed ayaa sheegay in safarka Jawaari uu carqalad ku keeni karo xasiloonida, geedi socodka siyaasada iyo madasha wada tashiga qaran ee bishan loogu balansan yahay Kismaayo.
“Waxaan dareen ka muujineynaa Safarka Guddoomiyaha Baarlamaanka uu ku tagay Dhuusa Mareeb, isagoo aan wax wada tashi ah kala yeelan cida ay quseyso, waxaa u aragnaa safarkaas inuusan u adeegeyn Nabadda, wada hadal-siintii socotay ee Galmudug iyo Ahlusuna, sidoo kale waxaa uu safarkaas carqalad ku yahay xasiloonida, geedi socodka siyaasada iyo madasha wada tashiga magaalada Kismaayo bishan loogu balansan yahay”ayuu yiri Madaxweyne Guuleed.
Madaxweyne Guuleed ayaa sheegay in safarka Guddoomiyaha Baarlamaanka ee Dhuusa Mareeb ay ka dambeyso ujeedooyin qarsoon, isagoo mar kale muujiyay sida uu ugu walaacsan yahay.
“Waxaan aaminsahahay in ujeedooyin qarsoon uu safarkaas ka dambeeyo, aad iyo aad uga xunahay in Guddoomiyaha baarlamaanka oo ah mas’uul aad u sareeya intuu dadka Soomaaliyeed isu soo dhowaanshahooda, nabadooda iyo xasiloonidooda ka shaqeyn lahaa in tallaabooyinkiisa ay u muuqato kuwo carqalad ku ah Nabadda iyo xasiloonida dalka”ayuu mar kale yiri Madaxweynaha Galmudug.
JawaariSidoo kale waxaa uu xusay inuu ka cabsi qabo in safarkaas uu kala qeybsanaan ku keeno hey’adaha kala duwan ee dowladda, isagoo ugu baaqay Baarlamaanka in arrimahaas ka digtoonaado.
Wafdi uu hogaaminayo Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo uu wehliyo Kuxigeenkiisa labaad iyo 24 Xildhibaan ayaa si diiran loogu soo dhoweeyay Dhuusa Mareeb, halkaasoo ay maamulaan Maamulka Culumaa’udiinka Ahlusuna Wal-jameeca oo aan aqoonsaneyn Maamulka Galmudug.
Title: Guuleed “Safarka Jawaari ee Dhuusa Mareeb wuxuu carqalad ku yahay xasiloonida iyo geedi socodka”